China YASKAWA AUTOMOBIL ukutshiza iirobhothi MPX1150 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Inkqubo ye- ukutshiza i-robot MPX1150 yenziwe ngomzimba weerobhothi, inkqubo yokusebenza kweconsole, ikhabhinethi yokuhambisa amandla kunye nomlawuli weerobhothi. Umzimba ophambili we-6-axis nkqo iirobhothi ezichaziweyo, indawo edibeneyo yokulungisa iirobhothi (i-axis ye-S / L ayisebenzi), inokusebenzisa indawo ekufutshane nesisu seerobhothi, kwaye ibeke into efafazwe kufutshane neerobhothi ukuze iqonde irobhothi kunye nento edibeneyo Vala umsebenzi wasekhaya. Iindlela zokuhlohla zibandakanya ukunyuka komgangatho, ukunyusa udonga, kunye nokujongela ezantsi ukufezekisa ubume obuguqukayo.
57Kg 1kVA 350 ° / umzuzwana 350 ° / umzuzwana
400 ° / umzuzwana 450 ° / umzuzwana 450 ° / umzuzwana 720 ° / umzuzwana
Ngoku i ukutshiza irobhothi Ukunikezelwa kwepeyinti yemoto kukwaxhotyiswe ngesixhobo esiphathwayo esinokucwangciswa esinokwenza iinkqubo ezingaxhunyiwe kwi-intanethi kwaye sinokuseta inkqubo yokutshintsha umbala. Iirobhothi zinokubaleka ngokungqinelana nenkqubo yokuhlela kwangaphambili kunye nenkqubo yeparamitha, ephucula kakhulu ukusebenza kwepeyinti.
Izinto ezininzi ezisetyenzisiweyo ebomini ziyatshizwa, njengeefowuni eziphathwayo, iimoto, njl njl ukutshiza iirobhothi ukusebenza. Ukutshiza iirobhothi Unokuphucula ukusebenza kwemveliso yamashishini, ukuzisa umgangatho wokutshiza, kunye nokunciphisa izinga lokulungiswa kweemveliso ezigqityiweyo. , Esinceda ekwakheni umzi mveliso oluhlaza okusingqongileyo.
Egqithileyo IYASKAWA YOKUZOBA IROBOT MOTOMAN-EPX1250
Okulandelayo: YASKAWA laser iwelding irobhothi MOTOMAN-AR900
I-6 Axis yokupeyinta iRobhothi
Izixhobo zokupeyinta iRobhothi
Amashishini okupeyinta iRobhothi
Imizobo yokupeyinta iRobot Arm
Umatshini wokupeyinta iRobot
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,